भदाै १५, राष्ट्रिय पुस्तकालय दिवस
सूर्यदेवको पूजा आराधना गरी छठ पर्व मनाइँदै
नेपालकै पहिलो केबलकार सेवा सुरू भएको २३ वर्ष पूरा भएको छ । चितवन कोई समुह अन्तर्गत मनकामना दर्शन प्रा.लि.द्वारा सञ्चालित मनकामना केबलकार स्थापना भएको बुधबार २३ वर्ष पूरा भएको हो ।
मनकामना केबलकार वि.सं. २०५४ पुस महिनाबाट निर्माण आरम्भ भएको थियो । निर्माण आरम्भ भएको १० महिना अर्थात वि.सं. २०५५ कार्तिक महिनामा यसको निर्माण सम्पन्न भइ सोही मंसिर ८ (सन् १९९८ नोभेम्बर २४) का दिन नेपालकै पहिलो व्यवसायिक केबलकार सेवाको आरम्भ भएको थियो । २३ वर्षअघि श्रद्धेय लक्ष्मणबाबु श्रेष्ठले मनकामना दर्शन प्रा.लि. मार्फत मनकामना केबलकारको सेवा शुभारम्भ गर्नुभएको हो ।
प्रत्येक वर्ष हजारौं भक्तजनहरू चितवन जिल्लाको कुरिनटारस्थित चेरेसबाट यो केबलकार हुँदै गोरखा जिल्लामा अवस्थित प्रसिद्ध मनकामना मन्दिर पुग्ने गर्दछन् । स्थापनाको २३ वर्ष पूरा भएको सन्दर्भमा कम्पनीले दिएको जानकारी अनुसार यो अवधिमा करिब १ करोड ६० लाख यात्रु तथा भक्तजनहरुले सेवा लिएका छन् ।
३.०२ किलोमिटर लामो यो केबलकार अष्ट्रियाको सुप्रसिद्ध केबलकार निर्माता कम्पनी 'डोपलमायर' को प्रत्यक्ष निगरानीमा निर्माण गरिएको थियो ।
कुल २० वटा टावर प्रयोग गरिएको यो केबलकारको तल्लो स्टेशन उचाइ समुन्द्र सतहबाट २५८ मिटर रहेको छ भने माथिल्लो स्टेशनको उचाइ १,३०२ मिटर रहेको छ । १० मिनेटमा माथिल्लो स्टेशनसम्म पुग्ने यो केबलकारको गति क्षमता ०.६ मिटर प्रति सेकेन्ड रहेको छ । ३१ यात्रु बोक्ने ३ कार्गो बोक्ने गण्डोला रहेको मनकामना केबलकारले ६ व्यक्ति प्रति डब्बा यात्रुका दरले प्रति घण्टा ६६० यात्रु ओसारपसार गर्न सक्दछ ।
३० करोड लागतमा नयाँ प्रविधिमा स्तरोन्नति हुँदै
केबलकार संचालन भएपछि मनकामना क्षेत्र र यस आसपासका क्षेत्र एक प्रमुख पर्यटकीय गन्तब्यका रुपमा विकास भएको छ । सो क्षेत्रमा उल्लेखनीय पर्यटन पूर्वाधार तथा सामाजिक क्षेत्रमा पनि विकास भएको कम्पनीले गरेको छ । केबलकारकै कारण मनकामना क्षेत्र विश्व सामु परिचित छ ।
संचालनको २४ औं वर्षमा आइपुग्दा प्रयोगमा आएका प्रविधि पुरानो हुँदै गएपनि कम्पनीले नवीनतम प्रविधिको विकासलाई पछ्याउँदै त्यसलाई अपडेट गर्दै लगिने बताएको छ ।
कम्पनीद्धारा प्रेषित विज्ञप्तिका अनुसार मर्मत सम्भार खर्चसमेत अत्यधिक भइरहेको र स्पेयर पार्टस पाउनसमेत केही वर्षभित्र कठिनाई आउन सक्ने अवस्थालाई मध्य नजर गर्दै यहि आर्थिक वर्ष (२०७८/०७९) बाट केबलकारको प्रविधिको स्तरोन्नतिसमेत गरिने छ ।
हाल रहेको एनालग प्रणालीलाई डिजिटल प्रविधिमा स्तरोन्नति गरिने छ जुन तीन महिना तीन चरणमा सम्पन्न हुनेछ ।
स्तरोन्नति कार्य कम समयमा सकिने गरी यात्रुलाई नियमित सेवा प्रवाह गर्दै २०७९/८० र २०८०/ ८१ को भदौ महिनासम्म स्तरोन्नति कार्य सकिने कम्पनीले विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
स्तरोन्नतिमा डि/सि ड्राइभ प्रणालीलाई ए/सी ड्राइभमा तथा कन्ट्रोल प्रणालीलाई एनालगबाट डिजिटल प्रणालीमा परिणत गरिनेछ । यस्तै गरी केबलकारको लठ्ठा ग्रिप जस्ता महत्वपूर्ण पक्षमा स्तरन्नोति हुनेछ । तर भवन, टावरहरु बुलह्वीलहरु साबिककै रहनेछन् । कम्पनीले स्तरोन्नति गर्दा ३० करोड लागत लाग्ने अनुमान गरेको छ ।
मनकामना केबलकारका निर्देशक राजेशबाबु श्रेष्ठबाट प्रेषित मनकामना केबलकारको निर्माणका तस्बिरहरूः